ကွယ်လွန် သွားပြီ ဖြစ် တဲ့ အဖေဖြစ်သူ အကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာ ပြောလာ တဲ့ “ခေးဆက်သွင်” – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ကွယ်လွန် သွားပြီ ဖြစ် တဲ့ အဖေဖြစ်သူ အကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာ ပြောလာ တဲ့ “ခေးဆက်သွင်”
ကွယ်လွန် သွားပြီ ဖြစ် တဲ့ အဖေဖြစ်သူ အကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာ ပြောလာ တဲ့ “ခေးဆက်သွင်”
By Ga MonePosted on June 21, 2021
ကြာခဲ့ပါပြီ အဖေ ရက်တွေလည်းပြောင်း လတွေဟောင်းလို့ ဆောင်းအလီလီ နဲ့ မိုးအခါခါဖြတ်နွေဘက်တွေလည်းမျက်ရည်စက်တွေနဲ့ အိပ်တန်းတက်ခဲ့ဖူးပါပြီ တစ်ခြားမိသားစုများကို အားကျငါးတန်းနှစ် အဖေ့အလောင်း မီးတိုက်ထဲသွင်းကာနီးကို သတိရမိပါသေးတယ်
ကန်တော့ရင်းတွေး အဖေအိပ်နေတာလေးများ ဖြစ်မလား??? အခေါင်းဖုံးကို လှစ်ဟ ချစ်ပါရစေဦး နေပါဦး လို့တဖွဖွ ခေါ်ချင်ပေမယ့်
နာကျင်လွမ်း လို့ မအော်နိုင်တော့ပါဘူး
လွမ်းတယ် အဖေ မုန့်ဖိုးလေးတွေ အရင်လို ပေးပါ စာမရတဲ့အခါ လာဆူပေးပါ အဖေက သီချင်းတွေ ဆို ဒီက အဖေ့သမီးအငယ်မ ကပြချင်သေးတာ
စစနောက်နောက် စိတ်ကောက်ချင်သေးတာ ဘယ်တော့ မှ ပြန်မလာနိုင်မှန်းသိပေမယ့် ကောင်းမှုတစ်ခု နေ့စဉ်ပြုရင်းသမီး ဆုတောင်း တိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုရင်လေ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အဖေဖြစ်သူအကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာပြောလာတဲ့ ၊ ခေးဆက်သွင်
သံသရာတစ်ကွေ့ကွေ့ ပြန်တွေ့ပါရစေ အဖေ…….. Happy Father’s Day
ၾကာခဲ့ပါၿပီ အေဖ ရက္ေတြလည္းေျပာင္း လေတြေဟာင္းလို႔ ေဆာင္းအလီလီ နဲ႔ မိုးအခါခါျဖတ္ေႏြဘက္ေတြလည္းမ်က္ရည္စက္ေတြနဲ႔ အိပ္တန္းတက္ခဲ့ဖူးပါၿပီ တစ္ျခားမိသားစုမ်ားကို အားက်ငါးတန္းႏွစ္ အေဖ့အေလာင္း မီးတိုက္ထဲသြင္းကာနီးကို သတိရမိပါေသးတယ္
ကန္ေတာ့ရင္းေတြး အေဖအိပ္ေနတာေလးမ်ား ျဖစ္မလား??? အေခါင္းဖုံးကို လွစ္ဟ ခ်စ္ပါရေစဦး ေနပါဦး လို႔တဖြဖြ ေခၚခ်င္ေပမယ့္
နာက်င္လြမ္း လို႔ မေအာ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး
လြမ္းတယ္ အေဖ မုန႔္ဖိုးေလးေတြ အရင္လို ေပးပါ စာမရတဲ့အခါ လာဆူေပးပါ အေဖက သီခ်င္းေတြ ဆို ဒီက အေဖ့သမီးအငယ္မ ကျပခ်င္ေသးတာ
စစေနာက္ေနာက္ စိတ္ေကာက္ခ်င္ေသးတာ ဘယ္ေတာ့ မွ ျပန္မလာႏိုင္မွန္းသိေပမယ့္ ေကာင္းမႈတစ္ခု ေန႔စဥ္ျပဳရင္းသမီး ဆုေတာင္း တိုင္းသာ ျပည့္မယ္ဆိုရင္ေလ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ အေဖျဖစ္သူအေၾကာင္း စိတ္မေကာင္းစြာေျပာလာတဲ့ ၊ ေခးဆက္သြင္
သံသရာတစ္ေကြ႕ေကြ႕ ျပန္ေတြ႕ပါရေစ အေဖ…….. Happy Father’s Day
ရင်ခုန်စရာ ကောင်းတဲ့ ရေကူး ဝတ်စုံလေး နဲ့ ပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင်နေ တဲ့ ရတနာဘို
ကြည့်ရှုသူ များပြားနေတဲ့ မော်ဒယ် လုလုအောင် ရဲ့ အမိုက်စား TIK TOK ဗီဒီယိုလေး
Previous post ပုရိသတွေ ရင်ဖို သွား အောင် ဘစ်ကနီ ဝတ်ပြ လိုက်တဲ့ ခင်အင်ကြင်းကျော်
Next post အရမ်း လန်း တဲ့ ဝတ်စုံလေး နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ပိုစ့်တွေပေးနေ တဲ့ မော်ဒယ် ဖူးပွင့်ခိုင် ရဲ့ VIDEO
သူမကိုယ်တိုင် အောက်ဆီဂျင်(၈၀)အောက် ထိ ကျခဲ့ပေမယ့် စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ အောင်မြင်စွာ တွန်းလှန် နိုင် ခဲ့တဲ့ အချက်တွေ ကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ